U-Report ရဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ပြီးဆုံးတဲ့အထိ ဖြေဆိုလေ့ရှိပါသလား။
5501 responded out of 31075 polled
သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ပြီးဆုံးတဲ့အထိမဖြေဆိုဖြစ်တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
737 responded out of 862 polled
other reason for not answering poll to the end
94 responded out of 125 polled
U-Report မေးခွန်းတွေကို ဘယ်ရက်မှာ ပို့ပေးစေချင်ပါလဲ?
5169 responded out of 5376 polled
U-Report မှာ လူငယ်တွေ ပိုမိုပါဝင်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
5032 responded out of 5169 polled
other way to promote U-Report
182 responded out of 221 polled
2020 မှာ U-Report ကနေ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို မေးစေချင်ပါသလဲ? တိတိကျကျဖော်ပြပေးပါ
3949 responded out of 5032 polled